Mabhangi Anokurudzira Kupisa Kwenyika | Martech Zone
Chipiri, August 7, 2007 China, August 9, 2007 Douglas Karr
UPDATE 8 / 9 / 2007: Haisi chokwadi kana yaive nechokuita neangu blog positi, asi Sky Zvemari izvozvi zvadzorera iyo $ 1.75.
Mharidzo kubhangi rangu, Sky Zvemari:
Musi wa8 / 3/2007 ndakaenda kuSmith Valley ATM uye County Line ATM kubva paUS31 uye maATM ese ari maviri aisashanda. Ndingafarire kubviswa kwe08-03-2007 FOREIGN ATM USAGE SERVICE FEE $ 1.75 paaccount yangu. Ndakanga ndisina imwe sarudzo kunze kwekushanyira ATM yeimwe bhangi.
Mhinduro kubva kuSky Bank:
Nehurombo isu hatizokwanisi kudzosera mari yekunze yeATM yekushandisa sevhisi. Kune nzvimbo shanu dzakasiyana mukati memakiromita mashanu mukati meGreenwood. Kuti uwane imwe nhaurirano yenyaya iyi unogona kutaura nemaneja wako weGreenwood Financial Center.
Zvakare nekubatana kuri kuuya neHuntington Bank unogona kushandisa chero Hunington Bank ATM muchina pasina chero sevhisi yekubhadhara zvachose. Ikozvino pane 1,400 ATM pakati peSky neHuntington yaunogona kushandisa.
Maita basa nekubhanga neSky Bank.
Ichi chikonzero nei ndichivenga mabhangi uye nei hurukuro yapera:
Usanditende nekubhanga neSky Bank. Ndakaedza kaviri kubhengi neSky Bank asi maATM ako aive pasi.
Saka iwe unotarisira zvakakwana kuti ndienderere mberi nekutyaira kubva kuATM kuenda kuATM kudzamara ndawana imwe iri kushanda?
Ini ndinofanirwa kufara kuti kuchave ne1,400 mamwe maATM anogona kunge asiri kuwanikwa?
Kana iwe wakamboona kuti mangani mafees andakakwikwidza nevakomana ava, waigona kudzipwa. Icho chokwadi chekuti havazorevereri yakapusa $ 1.75 hazvina musoro. Ndinovimba dhipatimendi rese revatengi veVatengi rinoderedzwa mukubatanidzwa.
Heano nzvimbo shanu… zviri nyore, huh?
Aug 7, 2007 pa 9: 08 AM
Wow! Wagumbuka chaizvo.
Zvinonzwika sekunge iwe wabhadhara zvakawanda
yemari. Kubva pane zvandakaverenga
uri simba rakakura mu blogger
nyika. Vanogona kunge vari kukufonerai
dzoka munguva pfupi.
Aug 7, 2007 pa 10: 24 AM
Ehe, vakandibata! Ini chaizvo handina kutsamwa kusvika ndaverenga mhinduro! Ini ndoda kuve nechokwadi chekuti vanowana yavo $ 1.75 inokosha kubva mune izvi. 🙂
Aug 7, 2007 na2: 10 PM
Iwe unofanirwa kuenda nebhangi repamhepo. Ndanga ndiri kubhengi ne Everbank kwemakore masere apfuura. Vanondidzorera inosvika kumadhora matanhatu / mo pamari dzeATM. Ivo vanotopa postage yakabhadharwa emvuropu kutumira mareti mukati.
Everbank inopawo toni yezvimwe zvinhu zvikuru zvinogona kubatwa nemabhangi mazhinji.
Handikwanise kutenda kuti vangani vanhu vachiri kushandisa zvidhinha uye matope mabhanga. Ini handioni chaizvo chirevo.
Aug 7, 2007 na3: 15 PM
Kungoita kuti unzwe zvirinani - kwete, kwete chaizvo.
Ini ndingati inguva itsva yebhangi, asi mamiriro acho haangaite nani. Sarudzo yako chete ndeyekutaura nemaneja wako webhanga.
Re ma1400 ATMs - ndiwo 1400 pakati pemabhangi maviri, kwete gumi nemana matsva, uye akapararira pakati penyika ngani? Uye, wakamboona ATM yeHuningdon kwaunogara? Handisati ndamboona imwe pano.
Yangu nhoroondo account bhengi iri padenga, futi. Yakatengeswa katatu kana kana kubva zvandakaveko. Handina kumbobvira ndaita dambudziko, asi ini handishandisi maATM.
Aug 7, 2007 na10: 36 PM
Ini ndinofunga izvo zviri kunyatso kuvhiringidza ndeyeZVINONYANYA mutengo wakakwira wemitero yebasa. $ 1.50 kusvika $ 1.75 pakutengeserana? Heck, iwe unofanirwa kubvisa yakaderera $ 100 panguva kuti uwane iyo sucker inosvika ye1%!
Muno muCanada isu tinongova nemabhangi mashoma ayo akanaka, zvisinei, pari kuve nekushomeka uye kushoma maATM kubva kubhangi rega rega uye akawanda emaATM akazvimirira anobuda munzvimbo dzese. Mashomeka emabhangi emaAT uye mamwe akazvimiririra = mamwe mabasa ebhadharo…
Ndinozviwana ndave kuti "YES!" kumari-yekumashure paunobvunzwa panguva yekutora kuchitoro - hapana benzi rebasa rekubhadharisa…. Uye chii chinonzi heck ne 'service charge' chero zvodii? Imari yeCONVENIENCE. Bhengi rangu rinondibhadharira sevhisi - kunyatso kusanyatsoziva kuti chii chandinowana pazviri…
Mabhangi nemakambani efoni - iyo bane yekuvapo kwangu.
Aug 8, 2007 na7: 18 PM
Mhando yekusetsa… ndinofunga ndichine mukana wekuti ndive neRoyal Bank yeCanada account kumusoro uko. Dai yanga isina kuvharirwa fizi (iyo ingangove yaive ...… ndiani anoziva, pamwe ndiri mamioneya! Kunyanya izvozvi iyo loony iri kukura yakasimba kupfuura yedu buck!
Ameni kumabhangi nemakambani efoni. Zvinotaridza sekunge iwe mukuru sekukambani, unonyanya kuwedzera pakutarisira mutengi! Kanda ndege dzendege mukati imomo zvakare.
Aug 8, 2007 na7: 20 PM
@Rick: Ini ndiri hombe online banker, Rick. Ini ndinofunga ndosaka ndakanyanyisa kupisa pane izvi. Ini ndakatovhura account yangu online! Izvo hazvina kumbovatorera kana cent kubata bhizimusi rangu.
@Randy: Zvakanaka kunzwa kuti varikukubata zvakanaka, Randy! Ndiri kuzovhura account navo.
Aug 9, 2007 pa 11: 10 AM
Isimba reblog here? Bhengi rangu rakadzosera iyo $ 1.75 nhasi.
Aug 14, 2007 na5: 27 PM
Iwe ungatsunga sei kuita chirevo iwe chaunotarisira iyo yese yeCustomer Service Dept yakadzikira nekuda kwekubatana ??? Ya ziva, kune vazhinji vedu vanoshanda ipapo izvo ZVINGADA kudzosera imi mose mari dzenyu asi isu hatina mvumo yekuzviita. Kune mazana evanhu vari kuzorasikirwa nemabasa avo. Mazana evana avo mararamiro avo avanoshandisa achachinja zvakanyanya. Saka usataure zvakadaro nekuti iwe haugone kuuya kuzobata neupenzi hushoma $ 1.75 ATM fizi iyo iwe yawakazodzosera chero nzira kune yako diki yechemberebhusaiti webhusaiti. Yayo kwete yevatengi masevhisi mhosva iwe yawakabhadhariswa uye haisi mhosva yavo haina kudzoserwa pakutanga. Izvo iwe zvawakaita kuti udzore zvaive zvakanaka asi zvirevo zvine hukasha zvawakataura zvakanangiswa kuvanhu vasiri ivo. Ini ndinogona kutokuudza kuti kana iwe ukataura kune CHIMWE chevamiriri vebasa vanokuudza ivo VANODA kukudzosera iwe fizi. Saka usati wamhanyisa muromo wako nezve vanhu, ziva chokwadi chako usati wapwanya vanhu zvakanyanya kupfuura izvo zvakatovatsikirira nekambani. Vazhinji vanhu vari kurasikirwa nemabasa vanga varipo kwemakore uye haisi mhosva yavo kuti iwe wakabhadhariswa muripo uyo mumwe wemabhirionari akasarudza kubhadharisa kuitira kuti ave akapfuma. Izvo iwe zvaunofanirwa kunge wataura ndezvekuti iwe unotarisira kuti vanhu vanoita mitemo vanorasikirwa nemabasa. Isu hatibhadharwe chinhu uye tinotora kushungurudzwa kwakanyanya, komendi yako iri kushungurudzwa kudiki. Ungazvifarire sei kana mumwe munhu akakuudza mangwana kuti hauna basa zvakare? Kana kana mumwe munhu mumhuri yako akaudzwa kuti imwe kambani iri kutora yavo uye havachazodiwi? Icho chakaoma kutora kutora. Saka dont ita makomenti zvichibva pane zvaunofunga, dzidza chokwadi usati wafunga kuti unofanirwa kutishuwira tese pabasa.
Aug 14, 2007 na8: 36 PM
Iyo chete nzira iyo kambani inoshanduka ndeye kubva mukati. Kana vashandi vakuru vakasiya vashandirwi vakaipa kana makambani akashata, zvaizodzidzisa iyo kambani chidzidzo.
Kana iwe uchinyatsoda kuita chimwe chinhu nezvazvo uye iwe uchitenda kuti hazvina kunaka futi, saka unofanirwa kubva pane kutsigira rakadai sangano.
Iwe unoziva uye ini ndinoziva kuti Sky Bank (nemazita apfuura) inoita mari hombe kubva kuvanhu varombo vanobhadhara fizi uye faindi. Inofanirwa kunge iri mhosva ... asi chero bedzi vaine malimings ekuita zvavanoda, ndinofungidzira kuti zvinhu hazvizoshanduke.
Aug 16, 2007 pa 5: 46 AM
BASA? Izvo zvinoreruka kutaurwa pane kuita kana mabasa anenge asingachapinde kwandinogara. Iko hakuna mabasa kunze uko asina mutemo / maitiro ayo munhu wese achabvumirana nawo. Kungoti nekuti unoshandira kambani isnt perfect haina kukuita munhu akaipa. Uye Vatengi Sevhisi haina chekuita neyako $ 1.75. Isu hatina kuita mari iyoyo kumusoro. Uye ndinotenda isu tese tinobhadhara iyo yakapusa fizi futi. Asi ini ndinofanira kukuudza, mazhinji mabhangi anoibhadharisa. Uye mazhinji mabhangi anokubhadharisa iwe kuti ushandise yako debit muchitoro. SKY haina, asi Huntington anoita. Saka iwe unoona, kune akawanda marongero ayo anoyamwa uye thats chero kwaunoenda. Ndine chokwadi chekuti mumwe munhu anoshanda kuWalmart anogona kukuudza nezve chimwe chinhu chinoyamwa ipapo… .saka kana vabhadharisa zvakawandisa pane chinhu ndechekuti vanhu vanokanganisa nekuti unonzwa kuti wabviswa? Zvinotaridza kwandiri kuti iwe unofanirwa kutsvaga zvinhu zvirinani zvekuita newe nguva pane kunetseka nezve $ 1.75 uye wozotendeuka woshuvira danho rese revanopfuura zana kuti vashaye basa uye mumutsetse wekushaya basa waunobhadhara mutero !!!!
Aug 17, 2007 pa 2: 22 AM
Ndingangotora mikana yangu pamitero. Anenge mitero inoedza kuve yakaenzana pamatanho emari (chaizvo, vanoranga vapfumi). Mari dzebhangi dzinongoranga zviri pakati nepasi.
Zvinonzwika sekunge iwe uri mushandi anofarira ane hanya nevatengi vako. Ndinovimba unowana chimwe chinhu chiri nani! Ndinonyatsoita.